खर्च विवरण बुझाउँदैनन् उम्मेदवार ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
खर्च विवरण बुझाउँदैनन् उम्मेदवार !
२०७० मंसिर २४, सोमबार ०५:४२ गते
भरतपुर । मंसिर ४ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भएका दुई हप्ता नाघिसकेको छ । संविधानसभाको सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता २०७० मा मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि दल तथा उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण पेस गरेका छैनन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च त बुझाएका छैनन् केहीले भने खर्चको फारम लगेका छन् । तर अचम्मको अर्को कुरा के भने, निर्वाचनमा उम्मेदवारले जम्मा गरेको धरौटी लिन भने आइरहेका छन् ।
‘अहिलेसम्म कसैले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्’, कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले भने, ‘उनीहरुले बुझाउन आउनु पर्ने हो, अझै समय बाँकी छ आउलान् ।’ खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘खर्च विवरण बुझाउनुभन्दा उम्मेदवारहरु धरौटी फिर्ता लिन धाइरहेका छन्’, उनले भने । अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरुले गरेको खर्च विवरण पनि समयमा बुझाएका थिएनन् । उनीहरुले मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिमात्र झारा टार्ने तरिकाले बुझाएका थिए ।
निर्वाचन आचारसंहितामा एउटा उम्मेदवारले अधिकतम १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दलहरुले निर्वाचनमा भएको खर्चको दायराका कारण डमी उम्मेदवारहरु खडा गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा प्रयोग भएका यस्ता डमी उम्मेदवारहरुको नाममा दल तथा शक्तिशाली उम्मेदवारहरुले प्रयोग गर्छन् ।
यता डमीका रुपमा खडा गरिएको उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा कमै मात्रामा बुझाउँछन् । निर्वाचनमा हुने अधिक खर्चलाई रोक्न पनि खर्चको सीमा आयोगले निर्धारण गरेको हो । तर पनि दल तथा दलका उम्मेदवारहरुले चोर बाटोबाट खर्च गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई रोक्न निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
यसपटको निर्वाचनलाई सबैभन्दा खर्चिलो तथा महँगो निर्वाचनको रूपमा लिइएको छ । चितवनका ५ निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र गरी ११५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनीहरु मध्ये १६ जनाको मात्र धरौटी (जमानत) जोगाएका छन् भने बाँकी ९९ जना उम्मेद्वारको भने धरौटी जफत भएको थियो ।